श्रीमान विजयेन्द्रको परिवारका साथ खुसी देखिइन् श्वेता, पहिलो पटक सार्वजनिक गरिन् यस्ता तस्बिरहरु – live 60media
काठमाडौ । श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको ६ वर्ष पछि नायिका श्वेता खड्काले दोस्रो विवाह गरेकी छन् । ६ वर्ष अघि नायक श्रीकृष्णसंग विवाह गरेकी श्वेता अहिले सम्म एकल जिवन विताएकी थिइन् । विवाहको दुई महिना पनि नपुग्दै श्रीकृष्णको निधन भएको थियो । गत मंसिर २२ गतेको लगनमा श्वेताले धुमधामले बिबाह गरेकी हुन् ।
उनले दुई वर्ष देखि प्रेममा रहेका प्रेमी विजयन्द्रसिंह रावतसँग गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा विवाह गरेकी छन् । विवाह अघि र विवाह पछि पनि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत आफ्ना शुभचिन्तकलाई आफ्ना भावना सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले अहिले भने दोस्रो पटक वैवाहिक जिवनको सुरुवात गरेकी छन् ।
सिमित साथीभाई र आफन्त माझ धुमधामले विबाह गरेकी श्वेताले विबाह गरेर घरमा पुगेपछि विजयेन्द्रको परिवारसँग खुशी देखिएकी छिन् । हिन्दू परम्परा अनुसार बिबाह गरेर विजयेन्द्रको घरमा गएकी श्वेताका पति विजयन्द्र सिंह रावत घनगढी निवासी हुन् ।
उनी घरका कान्छा छोरा हुन् । घरमा आमा बुवा सहित एक दाजु रहेको श्वेताले कुराकानीमा जानकारी गराइन् । व्यापारिक घरनाका विजयन्द्र र नायिका, निर्मात्री, उद्यमी र समाजसेवी श्वेता विगत केही समयदेखि रिलेसनसिपमा थिए । पढाई सकेर विज्नेश सुरु गर्ने योजनामा रहेका विजयेन्द्रको घरमा श्वेता पुगेपछि देखिएको यो रमाइलो र खुशीको माहोल
← फिल्म निर्माता निधिले लकडाउनमा गरिन् आफ्नै ४२ लिटर दुध दान : कसले लिए निधिको दुध ?
महिलाको मात्र राज चल्ने विश्वकै एकमात्र देश ! →